0သင်ဒီမှာနှင့်ထိုအရပ်မှတိရစ္ဆာန်နှင့်တူခုန်ကြသည်လျှင်အဖြစ် Jungle စွန့်စားမှုခံစားရနှင့်ခံစားစေချင်? ဤသည်အလွန်ကြောက်မက်ဘွယ်များနှင့်စူပါပျော်စရာဂိမ်းမှာသင့်ရဲ့လက်ကြိုးစားပါ- အဆောက်အအုံပုံစံရေးဆွဲခြင်းဂိမ်းအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတောတွင်းထီပေါက်. သင်အလွန်ထင်ရှားသည်တွေ့လိမ့်မည်ကဲ့သို့သင်တို့အစောပိုင်းကလေးဘဝရက်ပေါင်းပြန်ရေးဆွဲနှင့်အသက်အရွယ်မှကာတွန်းဗီဒီယိုကလစ်အဘို့နေကြရသောအောက်ခြေလိမ့်မည်- Rudyard Kipling အားဖြင့် Jungle Book မှအပေါ်အခြေခံပြီး Mowgli ၏ Adventures.
အသေးစိတ်အစီအစဉ်ဂိမ်းတစ်ခုဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက်ပြုစုသူသည်နှင့်ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ Gauselmann Group ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သူတို့ Jungle ထီပေါက်ဘို့ပွုပါပွီတူအဆောက်အအုံပုံစံရေးဆွဲခြင်း၏ဗျူဟာအဖွဲ့ကတစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဆောင်ပုဒ်အပေါ်အခြေခံပြီး slot ကဂိမ်းမိတ်ဆက်ပေးဖို့ကြိုးစားနေသည်. ဒီချက်ချင်းကစားသမားကစားရန်နေတာဆိုတော့ပေးသည်. ဒါဟာအစစျေးကွက်ထူးခြားသောစျေးကွက်အခွင့်အလမ်းများပေးခြင်းသည်. အသေးစိတ်အစီအစဉ်ဂိမ်းအများအပြားထိုကဲ့သို့သောစိတ်လှုပ်ရှားစရာဂိမ်းဖန်တီး, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလောင်းကစားရုံစျေးကွက်အတွက်အော့ဖ်လိုင်းနဲ့အွန်လိုင်းနှစ်ဦးစလုံး slot နှစ်ခု.
အဆိုပါ5ရက်ကြောင့်မှားယွင်းအစုံကဆုထီပေါက်တဲ့စာအုပ်၏စာမျက်နှာများ flickering ကျော်တစ်ဦး Jungle ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တည်ဆောက်, မှန်ကန်စွာနာမကိုပေးကမ်း- တောတွင်းထီပေါက်. ဒါဟာရှိပါတယ် 20 paylines.
တစ်ခုချင်းစီကိုဂိမ်းရဲ့ဇာတ်ကောင်ကစားသမားမှဆုလက်ဆောင်တစ်ခုခုသို့မဟုတ်အခြားရှိပါတယ်. ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ရက်ကြောင့်မှားယွင်းအလယ်၌အဆင် stomping တှေ့လြှငျ, အထိ4ရက်ကြောင့်မှားယွင်းချက်ချင်းရိုင်းမှဖွင့်ပါလိမ့်မယ်. လည်း, ထိုမျောက်အရက်ကြောင့်မှားယွင်းအထက်တက်ပြီးသင်ရှာလျှင်, သူတို့ stacked ရိုင်းသောသင်္ကေတများကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့သူတို့ကိုတက်ဆွဲနိုင်. အ kaa သို့မဟုတ်ဂိမ်းရိုင်းကကမ်းလှမ်းသည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆုကြေးငွေ feature ကိုလည်းရှိပါသည်. ၎င်း၏အရပ်ဌာန၌သော့ခတ်လိုက်တဲ့အခါ, ဒါကြောင့်ကစားသမားမှရှေးခယျြဖို့ option ကိုပေးထားတယ်3ခြင်းတောင်း, အခမဲ့လှည့်ဖျားသို့မဟုတ်ကဒ်အထိုင်အတွက်ထင်ရှားကျော်ကြားသောအပိုရိုင်းသောလည်းကောင်းဖြစ်နိုင်သည့်ဆုကြေးငွေ၏မတူညီသောမျိုးကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောအသီးအသီး. ခြင်းတောင်းတစ်ခုမှာလည်းဂိမ်းကိုအဆုံးသတ်နိုင်.
အဆိုပါလောင်းကစားအကွာအဝေးလှည့်ဖျားနှုန်း£ 500 အထိ£ 0,20 မှစတင်သည်နှင့်ဝင်. အသုံးပြုသောသင်္ကေတများအဓိကအားဖြင့်ဂိမ်းအမှတ်တံဆိပ်များမှာ, လျှံမီးနှင့်အတူ, အသီးဖလား, နှင့်ရိုင်းသောခြေရာများ.
ကမ်းလှမ်းအခြားအပိုဆုကြေးငွေတို့တွင် Baloo ရဲ့နက်နဲသောအရာဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် Bagheera ရဲ့ဟော့ Streak များမှာ. သင်တို့သည်လည်းတက်မှတစ်ဦးငွေသားဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရနိုင် 1000 ပန်းသီးပင်ပေါ်မှာ swinging စောင့်ရှောက်သောသူ Mowgli တဆင့်အကြိမ်သင့်ရဲ့အလောင်းအစားငွေပမာဏ, နှင့်ပန်းသီး၏မည်သည့်ကျပန်းဒီငွေသားဆုချီးမြှင့်ထုတ်ဖော်ပြသ. သင်ဤဆုနှင့်အတူလည်းစိတ်ကျေနပ်မှုမရပါကသင်သည်လည်းရှယ်ယာမှာဒီငွေသားဆုချီးမြှင့်ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်. သို့သော်, ဒီလည်းသင့်ရဲ့ပြီးသားရရှိခဲ့ပြီးဆုချီးမြှင့်ငွေကိုဆုံးရှုံးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ,.
တောတွင်းထီပေါက်အားလုံးသင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားငတ်ပြေဖို့အညာဘက်ကိုရပ်တန့်ဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကစဉ်ဆက်မပြတ်လောင်းကစားရုံအော်ပရေတာများအတွက်အကျိုးရှိသောဖြစ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သော slot နှစ်ခု၏ဖန်တီးမှုအတွက်ဖန်တီးမှုနယ်နိမိတ်တွန်းအားပေးရန်ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏ကြောင့်အဆောက်အအုံပုံစံရေးဆွဲခြင်းဂိမ်းအားဖြင့်နီးပါးအပေါငျးတို့သဂိမ်းအများအပြားဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများအနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီ, နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာကစားသမားများအတွက် entertaining နေကြတယ်. ထိုသူတို့က Jungle ထီပေါက်နှင့်အတူတောက်ပသောအလုပ်ပွုပါပွီ.